Mora azo: tsena fivahinian'ny mpitsidika | Martech Zone
Mora azo: tsenan'ny paositra vahiny
Alatsinainy, 10 Jona, 2019 Alatsinainy, 10 Jona, 2019 Douglas Karr
Ny ankamaroan'ny fangatahana azoko Martech Zone dia fangatahan'ny paositra vahiny. Misokatra tsara amin'ireo fangatahana ireo izahay raha toa ka tsy miseho ivelany ivelany na manandrana manangona backlinks fotsiny. Hentitra aho fa ny atiny omenay dia kalitao hitazona ny tanjoko hanampiana ny mpivarotra hikaroka, hahita ary hianatra momba ny haitao marketing.
Ny fizotran'ny lahatsoratra vahiny dia mety hampanaintaina. Raha mbola manana aho fizotry ny fandefasana, ho gaga ianao amin'ny hoe firy ny olona no tsy mamaly tsotra izao ny fanontaniana ilaina (na mandainga momba ny tanjon'izy ireo manao backlinking… grrr.)
Toy ny amin'ny olana hafa rehetra any, misy ny vahaolana amin'izany! Mora azo dia tsenan'ny marketing amin'ny atiny izay ahafahan'ny orinasa mamoaka ny lahatsoratr'izy ireo amin'ny tranokala avo lenta. Raha ny marina, ny tsenan'izy ireo izao dia manana tranokala 15,000 mahery voatanisa (anisan'izany ny Martech Zone) izay ahafahanao mividy sy mamoaka lahatsoratra ho an'ny vahiny.
Ireo mpamoaka dia afaka sivana amin'ny alàlan'ny fahefan'ny sehatra Moz azy, ny fahefan'ny pejy, ny fitsipiky ny mpanonta, ny fiteny, ary koa raha afaka mametraka backlink ao anatin'ny atiny ianao na tsia.
Araka ny hitanao amin'ireto ohatra vitsivitsy etsy ambony ireto, ny vidin'ny famoahana lahatsoratra dia mety ho fampiasam-bola… fa raha ny haben'ny tranokala ireo, ny mpihaino tratranao, ary ny fahefana ananany eo amin'ny sehatry ny indostria, dia mety ho fampiasam-bola lehibe ho an'ny orinasa na masoivoho.
Raha ny hevitro manetriketrika dia mieritreritra aho fa ny fitazonana ny vidim-piainana avo lenta dia fomba iray lehibe hanakanana ireo mpiverimberina… izay miaina amin'ny vidiny mirary ary mametraka rohy amina taonina amin'ny tranokala ambany kalitao. Amin'ny maha-mpampanonta ahy, ny zava-misy fa mifehy ny atiny aho ary afaka mankato azy io dia tena ilaina.
Manantena ny hizaha toetra ny serivisy ho an'ny mpanjifako aho ary koa hahita ny fomba fiasan'izany ho an'ireo orinasa manantena ny hampiasa ny famoahana ahy hanatratra mpihaino vaovao manana atiny lehibe.
Midira amin'ny kaonty maimaim-poana